Iyo Yakanakisa Nzira Yekutarisira Akawanda Twitter Maakaundi | Martech Zone
China, April 7, 2016 China, April 7, 2016 Douglas Karr
Ndokumbira undiudze iwe uchiri kufarira Twitter ... Ini ndinoda chikuva uye pamwe zvinogara zvichidaro. Izvo zvakati, ndanetseka kwemwedzi pamwe neiyo default Twitter desktop application yeMac. Sisitimu yangu yaizononoka kukambaira, uye Twitter yaizopedzisira isingateereri. Ndiri kungofungidzira kuti ivo vanogadzira uye vanhu veQA vari kuyedza iyo app havana vateveri vazhinji uye yakawanda yekugadzirisa mukati mezuva rese sezvandinoita.
I aiva kushandisaHootsuite asi zvaive zvisiri izvo zvakanyanya. Iyo yekushandisa interface ndeye zvishoma clunky, uye ini handitende kuti nzvimbo yacho yakagadzika mushe pakati pematweets, saka zvese zvinoita kunge blur. Uye ini ndinoda kuve neapp yakavhurika pane browser nekuti kubvira ini ndaiwanzovhara browser netsaona.
Mushure memakore ekusaishandisa, ndakafunga kurodha pasi TweetDeck uye zviyedze imwezve. Pakati pebhuku redu, bhuku rangu, chiitiko chiri kuuya, uye edu eemaimamu mapuratifomu, ini ndinobata maakaundi masere. Hongu, zvaive zviroto… kusvika zvino!
TweetDeck Akawanda Akaundi Zvimiro Zvinosanganisira:
Wongorora akawanda akatarwa mune imwe nyore interface.
Ronga maTweets anotumirwa mune ramangwana.
Batidza zviyeuchidzo kuti uchengetedze ruzivo rwuri kubuda.
Sefa kusecha kunoenderana nematanho senge kubatanidzwa, vashandisi uye zvemukati mhando.
Vaka uye utumire tsika nguva yekuisa pawebhusaiti yako.
Shandisa intuitive keyboard mapfupi ekufamba zvakanaka.
Nyaradza vashandisi kana mazwi kuti ubvise ruzha rusingadiwe.
Usambofa wakarova zorodza zvakare: TweetDeck timeline inoyerera mune chaiyo-nguva.
Sarudza yakajeka kana yerima theme.
TweetDeck Kunyange Inosanganisira Chikwata Management!
Zvichida kushamisika kukuru kana zvasvika kune TweetDeck ndizvozvo maneja echikwata yakavakwa yakananga mukushandisa! Ini ndinogona nyore goverana maakaunzi pakati penhengo dzechikwata Pasina kubhadhara pamushandisi rezinesi reti kana, zvakatoipisisa, kune Enterprise magariro manejimendi Ini ndinongo vhura iyo seti yekumisikidza uye ndowedzera iyo maakaundi eTwitter uye kana ivo vachizongove Tweet kunze kweaccount kana kugova muridzi!
Mukutendeseka kose, ndinotenda Twitter inofanirwa kutora desktop desktop OSX uye ipe TweetDeck panzvimbo. Inoshanda zvisina kana mutsindo. Handina chivimbo kuti izvi zvichaitika, zvakadaro, sezvo mwedzi wapfuura Twitter yakazivisa kuti ndizvo kuvhara iyo Windows vhezheni, inoda kuti vashandisi veWindows vapinde muwebhu webhu pachinzvimbo.
TweetDeck ichiri kuwanikwa se Chrome app uye Mac app ikozvino. Zvinotaridza kuti chirongwa cheWindows chaive pamudyandigere nekuti zvaisave nyore gadzirisa zvinyorwa zvepa Twitter zvinobudirira.
Ndokumbirawo upe TweetDeck kuyedza kana iwe uri paMac uye uratidze iyo app rumwe rudo muApp Store ratings! Ndaita!
Tags: gadzirisa akawanda maakaunzi e twitterTweetdeckTwittertwitter manejimenditwitter timu manejimendi
Apr 7, 2016 pa 9: 25 AM
Ndinobvumirana! Kwandiri, Twitter ndiyo ishoma mushandisi-inoshamwaridzika pasocial platform. Ini nguva pfupi yadarika ndakatanga kushandisa TweetDeck zvakare, uye ndonyatsoiwana iri mushandisi-inoshamwaridzika. Ndatenda nekugovana!